I-IL-76 MD entsha / izinkinga ezinama-flaps Ngingathola indlela yokufaka amafulethi!
Umbuzo I-IL-76 MD entsha / izinkinga ezinama-flaps Ngingathola indlela yokufaka amafulethi!
3 izinyanga 1 iviki edlule #1465 by Cub51
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngilanda i-MD enhle kakhulu IL-76 MD nge-VC, indiza enhle kakhulu futhi enhle kakhulu eyenzelwe FSX, okuwukuphela kwenkinga (futhi kuyangidina!) ukuthi angikwazi ukufaka amafulethi, angikwazi ukuthola indlela, futhi kuyangikhathaza kakhulu!
Uma othile engangisiza ngiyobonga kakhulu!
2 izinyanga 1 iviki edlule #1485 by dw020352
Ngami ezinye izilawuli ziyahlanya
izinyanga 2 14 amahora adlule #1493 by dw020352
Amabhuleki akhona ngaso sonke isikhathi futhi bekufanele ngikhiphe indiza.